Lagu Xidhay Dubai Iyo Caruurta Lagu Xidho | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Lagu Xayiray Dubia iyo Xabsiyada Caruurta
Waxaa wax ka qoray Warbixinta UAE
Dubai waxay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu badan. Waxay ku jirtaa liistada ugu sarreysa ee socotada iyo ugaarsadeyaasha shaqada sababo la xiriira hantida waddanka iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda awgeed. Magaalada waxaa ka muuqda qurux iyo baashaal, xitaa kuwa aan waligood tagin magaalada quruxda badan. Waxay si fudud u tahay astaanta fursadaha aan dhammaadka lahayn ee dhismaha iyo dhismaha. Qurux in la arko!
Nala soo xiriir annagana waan ku caawin karnaa
Dubay: Magaalada ugu safarka badan
Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay jirto dhammaan quruxda ay ku leedahay magaalada Dubai ama UAE in ay bixiso, waxay ku heshay sumcad xoog badan oo isku mid ah xiritaanka booqdayaasha xitaa dembiga ugu yar.
Sanadihii la soo dhaafay, tiro soo koraya oo dalxiisayaal shisheeye ah oo aan guud ahaan ka warqabin sharciga adag, ee dulqaad la'aanta ee Imaaraadka Carabta, ayaa ku dhaca xabsi markii la helo mid ka mid ah shuruucda iyo qawaaniinta. In kasta oo aysan jirin wax dammaanad qaad ah oo ah in adiga ama kuwa aad jeceshahay aydaan ku dhici doonin dhibanayaashan, isla mar ahaantaana, qaadista tallaabooyin ku-filan oo ku habboon ayaa ah danahaaga ugu fiican. Marna ma ogaan kartid goorta ay noqon doonto wax anfacaya.
Qorsheynta Xiritaanka Socdaalka
Maahan inaad qorsheynaysid in lagugu xidho UAE sababta oo ah waxaad ku leedahay qalfoofka qolkaaga taasoo laga yaabo inay ka shakiso saraakiisha laanta socdaalka. Si fudud ugu yeer siyaasadaha ceymiska socdaalka. Sida caymiskaaga gawaarida caadiga ah, ceymiska guriga, iyo inta soo hartay, u qorsheynta wixii suuragal ah ee lagu hayn karo socdaalka waa caymis.
Marka, sidee ayaad u maraysaa dhammaan "sheyga caymiska socdaalka?"
La xiriir Xiriir Degdeg ah
Inta aad ku sugan tahay Dubai ama Abu Dhabi, waxbaa khaldami kara, taas oo ah daruuri maahan khalad adigu adigu. Samee liistada xiriirka degdegga oo u oggolow qof kale inuu haysto koobi. Liiskaaga xiriirka waa inay kujiraan qareenkaaga. Sidoo kale, qoyskaaga iyo saaxiibbadaada dhow waa inay joogaan oo ay suuragal noqdaan, dhakhtarkaaga.
Waxaa jira suuragal kasta oo taleefankaaga lagaa qaadi doono mar haddii lagu xidho. Haddii aad ku keydiso xiriiradaada SIM-ka iyo sidoo kale taleefankaaga, si dhakhso leh ayaad u qiimeyn kartaa dib marka fursadu isa soo bandhigto.
Hayso nuqulada waraaqahaaga
Hubso inaad haysatid koobiga dukumiintigaaga oo dhan. Kuwani waxay aad ugu anfici doonaan qareenkaaga raadinta xorriyaddaada oo ay ku cadeeyaan inaadan dambiile ahayn sida lagu soo oogay. Marka laga soo tago arrinta xarigga, weligaa ma sheegi kartid waxa Hooyada Dabiiciga ah ee kuugu keydsan Imaaraadka Carabta.
Sii Furaha Qolkaaga Furaha Saaxiib
Qaar ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah ee aad ugu baahan tahay xaalad kasta oo deg-deg ah ayaa gurigaaga ku jiri kara. U oggolaanshaha saaxiibkaa aaminka ah inuu haysto furahaaga waa go'aanka ugu caqliga badan ee aad qaadan doonto.
Haddii aad u dhacday daawo nooc kasta ha noqotee, waxaa wanaagsan in aad hesho warbixin dhakhtar oo kooban oo ka hor intaadan aadin Dubai. Dubai waxay leedahay walxo badan oo mamnuuc ah; Warqadda dhakhtarku soo qoro ayaa laga yaabaa inay noqoto uun noloshaada.
Had iyo jeer Ka Wanaagsan Si Aad Uga Baxdo Dhibaatooyinka Intaad Xallin Laheyd Mar dambe
Xaqiiqdii uma aadidid UAE, adoo rajeynaya in lagu xidho. Ilaa intaad ku dhejisid qawaaniinta dalka, waxaad xor u tahay sida shimbiru oo kale. Ka hortagida kadeedka iyo xiritaanka suurta galka ah waxay kujirtaa buugaag wanaagsan lataliyahaaga sharciga.
Waxa lagu hayaa Dubai iyo Maxaad ugu baahan tahay qareen kaas
In kasta oo dhammaan dagaallada sharciga ahi aysan u baahanayn caawinta qareenka, xaalado badan oo khilaaf sharciyeed ka dhex jiro, sida marka lagu arko inaad ku xayiran tahay garoonka diyaaradaha UAE, halis ayey ku ahaan kartaa haddii aad keligaa iskaa u baarto. Garyaqaannada waxay waqtigooda inta ugu badan bartaan sharciyada. Tani waa sababta ay u yihiin qofka ugu horreeya ee aad ku kalsoonaan karto haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga sharciga ah.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha ugu sarreeya ee ay tahay inaad adigu keligaa qareen u yeelato haddii laguugu hayo Dubai ama xabsi ku-yaal Juvenile:
Qareenku wuxuu leeyahay xirfadaha saxda ah, khibradda, iyo aqoonta si uu ugu dagaallamo adiga iyo xuquuqdaada. Way fahmaan ins iyo waxa ka baxsan sharciga. Waxay leeyihiin aqoon ku filan oo kaa caawinaysa gorgortanka. Sidaa daraadeed, qareenadu waxay leeyihiin waxa ay kugu qaadanayso inaad hesho heshiis wanaagsan oo aadan haddii kale helin. U fiirso in ay jiraan xaalado dhawr ah oo kuu oggolaanaya inaad sheegatid ajuurada sharciga ah. Tan macnaheedu waa marka laga soo tago helista maxkamad cadaalad ah, waxaa sidoo kale jira fursad ah inaadan bixin hal boqolkiiba.
Xereyso Xaashida Xaqa ah
Markay noqoto dhanka sharciga, waxaa muhiim ah in la xareeyo dukumiintiyada saxda ah ee maxkamadda. Meelmarinta xitaa dukumiintiyadaan midkood wuxuu halis gelin karaa kiiskaaga. Maaddaama qareennadu si ballaadhan u derseen sharciga, way yaqaanaan dhammaan dukumiintiyada ku habboon iyo habka ay tahay in la raaco inta lagu gudajiro xereynta. Tan micnaheedu waxaa weeye qareennadu waxay ku sugan yihiin meesha ugu wanaagsan ee kugu hagaysa dukumiintiyada ay tahay inaad u diyaargarowdid, sida, iyo goorta aad fayl gareeyso si loo hubiyo inaadan dhaafin waqtiga kama-dambaysta ah. Haddii aad ku guuldareysato inaad ka soo baxdid muddooyinkan xaddidan waxaa laga yaabaa in ay carqaladeyso hanaanka sharciga, kiiskaaga gebi ahaanba, ama xitaa waxaa loo adeegsan karaa lid kugu ah.
Ka fogow khaladaadka sharciga ah
Dadka caadiga ah waxaa laga yaabaa inaysan ka warqabin xuquuqdooda sharci ahaan muwaadin ahaan doorka qareennaduna waa inay kuu sharxaan xuquuqdaan oo kaa caawiyaan inaad u dagaallanto. Sidaad ogtahay, xitaa qareennada waxay kaloo kireystaan ​​qareenno kale wakiil sharci ahaan. Marka, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad kireysato adeegyada qareenka, maahan oo kaliya markii lagugu xiray garoonka diyaaradaha ee Imaaraatka laakiin sidoo kale markaad dib u eegeyso qandaraasyada, bilowga ganacsi cusub, ama la macaamilka waxyaabaha leh cawaaqibka sharciga. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad naftaada ka badbaadiso waxyeellooyin kasta oo sharci oo laga hortegi karo.
Kala shaqee Qareen si aad ula Midigtaan Garyaqaanka Dacwadaada
Maaddaama qareennadu ay lagama maarmaan u yihiin kiisaska maxkamadda, waxaad filan kartaa in qofka kaa soo hor jeeda uu la shaqeeyo qareen xilliyeed sidoo kale. Hubaashii, ma rabtid inaad dhex gashid qof sifiican u yaqaan sharciga. Waxa ugu xun ee dhici kara waa haddii arrimuhu kaa soo horjeedaan oo aad naftaada ku aragto qolka maxkamadda adoon lahayn qareen iyo aqoon sharci la'aan. Haddii taasi dhacdo, waxaad leedahay fursado aad u yar oo caato ah inaad ku guuleysato dagaalka sharciga.
Xoogga saar hagaajinta iyo bogsiinta
Xaaladaha dhaawaca uu ku lug leeyahay muranka ama takoorka, la shaqeynta qareenka ayaa kuu oggolaanaya inaad diiradda saarto habka raysashada. Macno malahan hadii xanuunku yahay mid dhaqaale, shucuur ama jir ahaaneed, inaad diirada saarto feejignaantaada iyo tamar darrada soo kabashada iyo soo nooleynta noloshaada caadiga ah waa muhiim.
Kuwani waa qaar ka mid ah sababaha badan ee sababta u shaqaaleysiinta qareen ay muhiim u tahay marka laguugu hayo Dubai ama aad ku lug leedahay muran sharciyeed kasta.